Om klubben Somali - Klub Kickstart : Klub Kickstart
Dansk Engelsk Arabisk Farsi Somali Tigrinya
Ku saabsan Klub Kickstart
Mashruuca Klub Kickstart – waa waxbarasho loogu talagalay ardayda qaxootiga ah ee da’doodu u dhaxayso 6-16 jir.
Ujeedada Klub Kickstart waxa waaye in ardayda ka qeyb qaadanaya loga caawiyo luuqada deenishka iyo xisaabta siday ugu ficnaadaan. Mashruucan wuxu ka yimid fikir laga keenay The Letterbox Club, taso faaido iyo isbadal fiican loga arkay ardayda kaga qeyb gashay wadanka Ingiriiska.
Caruurta ka qeyb qadanaya waxey helayaan oo loso diraya 6 baakadood oo kalaro badan ah kuwaso indhaha soo jiidanaya . Baakadahaas waxa ku jira buugag aqris ah, layliyo xisaab ah, iyo qalimada wax lagu qoro, kuwa wax lagu sawiro, qalabka wax lagu xisaabiyo iyo kuwa ciyaaro. Waxyaabaha ku jira baakadaha ayaa laso xulay iyadoo lala kaashanaayo lataliyayaal xirfadleh iyo macalimiinta dugsiyada hoose kuwaso leh aqoon gaar ah oo ku saabsan caruurta qaxootiga ah.
Baakada siddoo kale waxaa ku jira warqad salaan oo ku socoto gaar ahaan cunuga taso ka timid mid ka mid ah dadka na matala ee ku dabo-dayashada fiican leh oo layiraahdo Nadia Nadim iyo Jacob Riising. Baakad walba waxaa siddo kale ku jiri doono warqad waalidka ku socota, taaso ay ku qoran yihiin warbixin ah waxyaabaha baakada ku jira. Warqada ku socoto waaliidinta waxaa lagu fasiray ama lagu turjumay 5 luuqadadood oo uga badan qaxootiyaasha.
Mashruuca Klub Kickstart waxaa diyaariyay hay’adda qaxootiga Deenmaark, Als Research iyo daabacayaasha Alinea & Carsten. Mashruuca waxaa taageeraya ururka Egmont Fonden oo qayb ka ah siyaasadda guud ee maaliyadda 2017-2021, oo taageera dadaallada lagu xoojinayo caruurta nugul iyo dadka da’da yar.
Haddaad u baahato warbixin dheeraad ah, waxaad nagala soo xiriiri kartaa kontakt@klubkickstart.dk
Halkan waxa ka aqrisan karta wixi dheeraad ah oo ku saabsan ciyaaraha iyo barashada hay’adda qaxootiga.